actress American Oliviya Uayld ukweleta kakhulu ukuthandwa walo kuya ochungechungeni ukuthusa "Indlu MD", lapho eqala ukuvela emuva lé ngawo-2007 Kwakungemva le phrojekthi, waqala ukuthola indima ebalulekile nemisebenzi emikhulu. Kuyini biography of actress yimpumelelo futhi yini izinhlelo zakhe zokudala esizayo esiseduze?
Izinkanyezi abalandeli zihlale nentshisekelo nemingcele ngokomzimba kwezithombe zabo. Ngakho, Oliviya Uayld, ubude nesisindo ka esakhiwa 171 cm 58 kg, bangaziqhayisa isilinganiso sazo kula manzi: actress webele ivolumu 86 cm, okhalweni - 58 cm namathanga - 84 cm 2 Intombazane usayizi webele futhi 39 unyawo isixazululo ..
Oliviya Uayld ku zezinkanyezi uphawu "Izinhlanzi". On esihlathini sakhe labona isibanda actress encane wavuma ukuthi emibi wayezibheka njengembali evamile, usana. Yemvelo izinwele umbala Miss Wilde - ezimhlophe, imibuzo izintatheli amazed ', kungani yena ngesineke Brunette, udumo jokes kuphela.
Oliviya Uayld wazalwa ngo-New York City. Igama lakhe langempela - Koubern. Umndeni Koubern Olivia akuyena umuntu wokuqala owakhetha ubuchwepheshe yokudala: umama actress wasebenza njengendlela producer ithelevishini, ubaba wayeneminyaka engu-intatheli, umkhulu - the umbhali odumile, futhi anti - Sara Koduell - master umphenyi. Ngesikhathi Heroine of indaba yethu ine mfowethu nangokuthi dadewethu.
Oliviya Uayld kuphothula esikoleni esiphakeme e-Washington futhi Academy Massachusetts. Ngemva kwesikhathi esithile, umkhaya wakubo wathuthela e-Ireland, futhi wafika khona waba owaphothula Dublin esikoleni wokwenza.
Yena uthanda ukufunda. Phakathi izingcezu eyithandayo - "usole Dunces" (DK Tully) kanye "Yidla, Thandaza, Love" (E. Gilbert).
Oliviya Uayld, ogama Filmography kuze kube manje kuhlanganisa 35 sici amafilimu nasemidlalweni ewuchungechunge yethelevishini, waqala ukusebenza umsizi ukuze ukwazi ukukhetha abadlali.
Ngo-2003, le ntombazane kwaba lucky ukuthola ku umlingisi we "Skin" chungechunge. Ngaleso sikhathi wayehlala wadutshulwa movie "Ntombazane Next Door" futhi uchungechunge TV "Le OC," okuyinto wamngenisa igagasi lokuqala odumo.
Ngo-2006, u-Olivia ezama ukungena "omkhulu" movie, bese engena iphrojekthi "Alpha Dog", lapho udlala kule nkampani ka izinkanyezi ezifana Dzhastin Timberleyk, Sheron Stoun futhi Bryus Uillis. Futhi ngo-2007, umdlali kuziwa project kwesibhamu ngoba wakhe - ". House" TV ewuchungechunge Kube ayenakho indima udokotela Remi Hadli. Yilokho "House" Olivia enikeziwe ukuqhubeka okusheshayo career oyibamba.
Ngo-2010, esikrinini esikhulu iza ashisa izikhotha action-adventure Starring Wilde - "Tron:. Legacy" isabelomali le filimu zaba 170 mln. zamadola, futhi ehhovisi ibhokisi, uye eqoqwe cishe u- $ 400 million. Ukuqopha kwakungelula Olivia, kusukela actress kwadingeka ukunikela ngaso sonke isikhathi sakhe ukudlala ezemidlalo Quarry isudi ihlezi kuye ngokuphelele, futhi yena okungenani kancane eduze ekupheleleni ngokomzimba uhlamvu yakho. Lapho kuxoxwa, actress wavuma ukuthi umsebenzi ku indima Joan of Arc ephefumulelwe wakhe.
Ngokushesha ngemva ukudutshulwa ashisa izikhotha Wilde hit iphrojekthi "Cowboys and Njengabafokazi Nezakhamuzi." Kulesi ifilimu, wayewukuphela kuphela umculi we nendima female main. Ngo entshonalanga Dzhona Favro futhi iqhaza Harrison Ford Deniel Kreyg.
Oliviya Uayld, ogama Filmography kuyinto kancane kancane agcwaliswa imisebenti lenesitfunti, yaqala ukuna izilinganiso nabesifazane abahle kakhulu kwezokuzijabulisa. Futhi ngo-2009, umdlali ngisho kuthatha indawo yokuqala "umagazini ashisayo engamakhulu« »Maxim».
ukuphila Olivia Wilde komuntu siqu
Hollywood udumo wayevakashele izikhathi 2 washada. Indoda yokuqala actress - Tao Ruspoli - ethumba inhliziyo yakhe ngo-2003. Wilde iminyaka ke-18 kuphela ubudala. Tao kwakungokwelambu umndeni ahlukile. Ngokusho amahlebezi, abazali bakhe bafuna lo mshado, ngokuqondene lapho osemusha ngasese igana amabhishi American. Lo mbhangqwana cha fanele ntwana. beshadile wadonsa kwaze kwaba ngu-2011, bese ngokungazelelwe lo mbhangqwana yamemezela isehlukaniso yabo.
Ngemva konyaka, Oliviya Uayld ukuthi uzophinde ashade, kodwa lokho okumelwe zikwenze. actress umlingani kwaba Dzheyson Sudeykis. Ubizwa nge comedy izilaleli eyaziwa "Kwenzekani e Vegas," "Sesikhathele le Millers," njll Ngenxa bahlale ndawonye Jason Sudeikis, Olivia wadela ukuhlala ukhululekile e-Los Angeles futhi zayiswa eNew York. Ukuzama kwakhe neze yize: ngo-2014 actress lokuqala baba umama. INdodana wathola igama engavamile - Otis Alexander. Olivia wathi izikhathi eziningi ukuthi uyasifuna izingane eziningi, ngakho kufanele ulindele replenishment emndenini Jason Sudeikis.
actress izinhlelo Creative
Nokho, Oliviya Uayld yakha izinhlelo umndeni hhayi kuphela, kodwa futhi zokudala.
Ngo-2015, lo msebenzi sizoqala phezu abaculi edwaleni lasendle 1970. Indaba umqondo sifakwe ngokwayo Mik Dzhagger we «Rolling Stones», futhi uqondiswa movie ne-TV kuyoba Martin Scorsese. Wilde baphathiswe indima umka uhlamvu eyadlalwa Bobby Cannavale. Kungakhathaliseki ukuqopha kumdlalo chungechunge, izokhipha isiqephu umshayeli.
Futhi ngo-2015 esikrinini esikhulu ngeke fantastic isithombe «uLazaru», lapho wadlala Zoe ezithile - voskresitelnitsu efile. Co-inkanyezi Olivia uMarku Duplass futhi Donald Glover. Le filimu iqondiswe ngu-David Gelb ngaphambi kokuthi azidubule nje izikhindi ukuze DEBUT ngaye.
Yilokho Oliviya Uayld ihlela ukubamba ngo-2015, kodwa igunya esiyinhloko wakhe, yebo, uhlala nomndeni.
Ekaterina Guseva: Filmography nokuphila actress komuntu siqu
Andrew Chubchenko: Biography lokusungula, empilweni yakho
Ngubani odlala Nkosi Voldemort Harry Potter namafilimu?
Izizathu amalungelo: incazelo
Conjugation. Rule Isenzo conjugation
Abanamakhono kakhulu futhi ebukekayo abadlali Italy
Indlela ukupheka ushizi amakhekhe ne apula?